စာပေ | ဟန်ဆန်း
ကဗျာတစ်ပုဒ်၏လတ်ဆတ်မှု၊ ဖြတ်လတ်မှုအပါအဝင် ဉာဏ်နှင့်ခံစားမူပေါင်းစပ်ထားသည့် ကဗျာအမျိုးအစားကို နှစ်သက်ကြောင်း ကဗျာဆရာဇေယျာလင်းက ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
March 29, 2016 in စာပေ, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
ကဗျာဆရာ အောင်ချိမ့်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၏ မှတ်စု
‘‘ကျွန်‌တော်က ‌တွေ့ချင်တာ’’အမည်ဖြင့် ကဗျာဆရာ‌အောင်ချိမ့်နှင့်‌တွေ့ဆုံ‌သော ကဗျာအ‌ကြောင်း‌ဆွေး‌နွေးပွဲတစ်ခုကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက် ‌နေ့လယ် ၂ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဇွန်‌တောင်မြို့နယ်ရှိ ပဲန်မြန်မာရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
March 19, 2016 in စာပေ, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
ကချင်စကားအတွက် စာကို ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယာန်သာသနာပြုများက လစ်တင်စာလုံးကို အခြေခံ၍ တီထွင်ပေးခဲ့သည်။ ၁၈၉၅ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
February 11, 2016 in စာပေ, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
February 10, 2016 in စာပေ, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
ခေတ်စမ်းစာပေသည် ၁၉၃၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချို့၏ အရေးအသားပုံသဏ္ဍာန် အသစ်တစ်ခုမှ ထိုဝေါဟာရထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
January 7, 2016 in စာပေ, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
June 15, 2011 in စာပေ, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.